धुर्मुस–सुन्तलीलाई हाकुको पहिरोले पिरोल्यो ! | Screennepal
धुर्मुस–सुन्तलीलाई हाकुको पहिरोले पिरोल्यो !
Dec 05, 2016screennepalfeature, Sliver screen0
काठमाडौं, २० मंसिर । बालमैत्री देश निर्माणको अभियान लिएर देश दौडाहामा रहेका हाँस्य कलाकार सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) लाई रसुवास्थित हाकुको पहिरोले पिरलेको छ । बालमैत्री फिल्म ‘ज्योति’ प्रर्दशनका लागि रसुवाको धुन्चे पुगेका उनीहरुलाई स्थानीय पत्रकारले हाकु र डाँडा गाउँबासीको पहिरो पिडाबारे बताएपछि बिस्थापित परिवारसँग भेटसमेत गरेका छन् ।
जिविकोपार्जका बारेमा धुर्मुसले जिज्ञासा राख्दा पहिरो प्रभावित दार्जेले ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पालिरहेको दुखेसो पोखेका थिए । उनले भने, “खानको लागि त दैनिक काम गरेर पनि जोहो गरिरहेका छौँ, सुरक्षित ठाउँमा जग्गा नहुँदा सुकुबासी बन्नु परेको छ ।” उनीहरुको समस्या सुनेपछि धुर्मुसले हाकुबासीको समस्यालाई सरोकारवाला निकायसम्म पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
पत्रकारसँग छलफल गर्दै कुञ्जना घिमिरेले, हाकु र डाडाँगाउँका भूकम्प र पहिरोबाट बिस्थापित भएकाहरुलाई कुनै सुरक्षित ठाउँमा एकिकृत बस्ती बनाएर राख्ने सकिने सम्भावना औँल्याएकी छिन् । त्यसका लागि सरकार र सरोकारवाला निकायसँग पत्रकारले समन्वय गर्न सुझाव दिएकी छिन् । धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशन पिडितको पिडामा मल्हम लगाउने कार्यमा सम्बन्धित निकायलाई घच्घचाएर अघि बढ्ने उनीहरुले बताएका छन ।
Previous Postललितकला पत्रकारिता पुरस्कार चाँदनी, सेवा र अञ्जलीलाई Next Postरेवत–मेलिनाको ‘अलग उपहार’ (भिडियोसहित)